पूर्व राजदूत केशवराज झाको छुरी प्रहार गरी हत्या- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र ४, २०७५ जनकराज सापकाेटा, चन्द्रशेखर अधिकारी
काठमाडौँ — फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्व राजदूत ८० वर्षीय केशवराज झाको काठमाडौंको थापाथली स्थित घर भित्रै छुरी प्रहार गरी हत्या भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी मोहन थापाका अनुसार उनलाई बिहान घर भित्र मृत अवस्थामा फेला पारिएको हो ।
डिएसपी थापाका अनुसार उनको टाउकोमा छुरी प्रहार भएको चोट देखिन्छ। उनको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि टिचिङ अस्पताल लाने तयारी भइरहेको छ।
सिंहदरबार वृतका प्रमुख डिएसपी काजीकुमार अाचार्यका अनुसार घटनाबारे बिहान साढे ६ बजे परिवारले थाहा पाए पछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। झासँगै उक्त घरमा उनको श्रीमती तथा कामदार बस्ने गरेका थिए।
थप अनुसन्धानका लागि घटनास्थलमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोली पनि पुगेको छ।
पराष्ट्र मन्त्रालयमा शिष्टाचार महापाल रहेर काम गरेका झा फ्रान्सको राजदूत भएसँगै सहसचिव पदबाट सेवा निवृत्त भएका हुन्।
उनी विश्व सम्बन्ध परिषदको अध्यक्ष समेत रहेर काम गरेका थिए।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १०:२७
काठमाडौँ — एउटा विद्यार्थीले पढ्नका निम्ति खाइ–नखाइ क्याम्पसको फि तिर्छ, समय लगानी गर्छ, निद्रा बिगारी–बिगारी राति अबेरसम्म बसेर पढ्छ, अनि अति परिश्रमसाथ जाँच पास गर्छ । अर्को विद्यार्थी भने कक्षामा नियमित हुँदैन, पढ्ने झमेला गर्दैन ।
ऊ चिट चोरेर पास गर्छ कि अर्कालाई जाँच दिन लगाउने व्यवस्था मिलाएर पास गर्छ । यस्ता व्यक्ति ठाँटसित विश्वविद्यालय पढ्न गएको दृश्य कति अशोभनीय हुन्छ होला । यस्ता व्यक्तिले पछि गएर समाज र समुदायमा काम गर्दा कस्तो प्रभाव पार्लान् ? सेमेस्टर प्रणालीले स्नातकोत्तर तहमा केही सुधार ल्याउला कि भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छ ।
यहाँ दोष चिट चोर्ने वा अर्कैको कोठामा आफू मात्र बसी गाइडबुक र नोट हेरी–हेरी जाँच दिन लगाउने गार्ड वा परीक्षा केन्द्र अध्यक्षको मात्र छैन । दोष त परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र शिक्षा प्रणालीको पनि छ । हामीले कहिलेसम्म शिक्षा प्रणालीलाई बेथितिमा राखिराख्ने ? कहिले पढ्ने र नपढ्ने विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने ? कहिले परीक्षा हल वा जाँचको समयमा बाहिर शौचालयमा गएर चिट चोर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ? कहिले प्रश्नपत्र जाँच्ने शिक्षकले घूस लिएर अङ्क बढी थपिदिने प्रणाली अन्त्य गर्ने ?
कक्षामा कतिपय शिक्षकले चोरेर भए पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने खालका सन्देश दिन्छन् । यो लाजमर्दो कुरा हो । कतिपय शिक्षकलाई के बोल्नुहुन्छ, के बोल्नुहुन्न भन्ने हेक्का हुँदैन । हेक्का भए पनि मतलब गर्दैनन् । औपचारिक शैक्षिक कक्षामा शिक्षकको काम आफ्नो विषय–वस्तु आफूले पहिला राम्रोसित अध्ययन गरेर आउनु र विद्यार्थीलाई बुझ्नेगरी पढाउनु हो । असल शिक्षकले आफ्नो दायरामा रहेर अध्यापन गराउनुपर्छ । जथाभावी बोल्नु हुँदैन ।
हाम्रो शिक्षा, शिक्षक र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर उकास्न हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । विशेषत: सम्बन्धित निकाय र ती अन्तर्गत रही काम गर्ने व्यक्तिहरूले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सक्दो प्रयास गर्नु आवश्यक छ । विद्यार्थी स्वयं र अभिभावकसमेत शिक्षामा भइरहेको बेथिति सुधार्ने कार्यमा यथाशक्य लाग्नुपर्छ ।
– ऋषिराम पौडेल
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १०:२५